စီမံကိန်းများထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း - တရုတ်စီမံကိန်းများစက်ရုံ
mAh Horizontal သတ္တုကှနျ့ Pump
MAHR Horizontal ရော်ဘာကှနျ့ Pump
MSP ဒေါင်လိုက်သတ္တုကှနျ့ Pump
MSPR ဒေါင်လိုက်ရော်ဘာကှနျ့ Pump
အက်စ်အက်စ် Hydraulic Submersible Pump
အက်စ်အက်စ် Submersible Slurry Pump
DG ဘွိုင်လာ Feed ရေ Pump
MG Heavey Duty သဲ Pump
SB Horizontal သဲ Pump
အက်စ်အက်စ် Submersible သဲ Dredger Pump
Flow Pump Mixed HW ကြီးမားသော Flow
LJC Veritcal လိုင်း Shaft Pump
MD Multistage အမြင့်ဌာနမှူး Pump
MIS အလျားလိုက်အဆုံးစုတ်ယူခြင်း Pump
S က Big Flow ကိုနှစ်ချက်စုတ်ယူခြင်း Pump
QJ Submersible နက်ရှိုင်းသောကောင်းပြီ Pump
WQ Submersible မိလ္လာ Pump
ZW ကိုယ်ပိုင် Prime မိလ္လာ Pump
IHF ဖလိုရင်းပလတ်စတစ်ဓာတု Pump
MIH အလျားလိုက်အဆုံးစုတ်ယူခြင်း Pump
မီး Pump သတ်မှတ်မည်
Congratulations of the slurry pump with boat unit export for Malaysia river dredging. Related products SS SUBMERSIBLE SLURRY PUMP IS HORIONTAL END SUCTION PUMP MG HORIZONTAL GRAVEL PUMP VERTI...
Removable Multistage Water Pump diesel engine driven with trailer for an Africa friend! Flow: 25m3/h Head: 250m Power: 40Kw
18-06-13 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
18-06-12 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
အမှတ်2Xidu ကျေးရွာ, Boye မြို့, Baoding, Hebei ပြည်နယ် 071000, PR စနစ်တရုတ်
+86 151 0020 1848
Good News! 8x6E-MAH Spare Parts with Cera...
Notice: Six Preparations To Be Done Befor...
Mechanical Seal Maintenance Program Under...
GOOD NEWS! HYDRAULIC SLURRY PUMP FINISHED...
Good News! 100 sets Water Fire Pumps Fini...